खचाखच यात्रु हुने सिजनमा गोरखाका सार्वजनीक सवारी रित्तै | Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार ०९:०२
गत वर्षको यो सिजनमा गोरखा देखि काठमाण्डौँ, चितवन, पोखरा, गाउँदेखि सदरमुकाम आउजाउ गर्नेको लर्को लाग्थ्यो । यहाँबाट छुट्ने सवारी साधनमा खचाखच यात्रु हुन्थे । तर अहिले जिल्ला बाहिरिने र सदरमुकाम भएर ग्रामिण भेग जाने सार्वजनीक सवारी साधनमा यात्रु छैनन् ।
‘यात्रुबाहक सवारी साधन रित्तै छन्, पहिले क्यू थपेर गाडी चलाउनुपथ्र्यो’ दरौँदी यातायात सेवा प्रालीका सदस्य अन्जनबाबु खत्रीले भने ‘यो सिजनमा पनि यात्रु नहुँदा लामो समय लकडाउनमा सवारी साधन थन्क्याएका vसवारी धनीलाई ठुलो मार परेको छ ।’ यात्रु कम हुँदा कम्पनीमा भएका सबै गाडी नियमित चलाउन नसकिएको उनले बताए ।
आरुघाट, घ्याम्पेशाल, भच्चेक, बारपाक, बुङकोट लगायत ठाउँबाट आउन सर्वसाधारणले सिट पाउँदैनथे । तर अहिले यी ठाउँबाट सदरमुकाम आउन गाडी रित्तै छ । कोरोनाको प्रभावको कारण सर्वसाधारण यात्रामा कम निस्कएका छन् । टिका थाप्न आउजाउ गर्नेहरु कम देखिन्छन् । कतिपय मोटरसाईकल र निजी सवारी साधनमा आउजाउ गरेका कारण सार्वजनीक सवारी साधन रित्तै भएको ब्यवशायी बताउँछन् ।
सार्वजनीक सवारीमा हिड्दा कोरोना जोखिम धेरै हुने त्रासले मोटरसाईकल खरिद गर्नेहरुमा पनि बढेका छन् । गोरखा सदरमुकामका मोटरसाईक स्वरुमहरुले गत वर्षभन्दा यस वर्षको दशैँमा धेरै मोटरसाईकल बिक्री गरेका छन् । ग्रामिण भेगमा बिगतमा भन्दा निजी सवारी साधनको प्रयोग बढेको छ ।
गोरखादेखि काठमाण्डौँ, चितवन, पोखरा लगायत शहरी क्षेत्रमा सेवा दिँदै आएको पृथ्वीराजमार्ग बस संचालक कम्पनी प्रालीले गत वर्ष यो समयमा अघिल्लो दिन नै बसको टिकट बिक्री सक्थ्यो । तर अहिले आधा जसो सिट खाली राखेर गाडी कुदाउनुपरेको गुनासो कम्पनीको छ ।